Faah-faahino kasoo baxaya qaraxyo ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha (Sawiro) – Banaadir weyne
Faah-faahino kasoo baxaya qaraxyo ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha (Sawiro)
2-da Janaayo 2017
Muqdisho – Labo qarax oo waaweyn ayaa goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo qaraxyadan ay ka dhaceen meel ku dhow garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane ee sida weyn loo ilaaliyo.
Qaraxyada oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Dhawaaqa qaraxyada ayaa duhurnimadii maanta laga maqlay qeybo badan oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya qaraxyada ayaa sheegaya in ay ka dhaceen meel ku dhow albaabka Madiino Gate ee laga galo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Bartilmaameydka qaraxa ayaa lagu sheegayaa inuu ahaa hotel Peace oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha, waxaana hotelka sanadkii hore lagu qabtay shirkii madaxda urur goboleedka IGAD. Hotelkan ayaa waxaa xiligaas ku sugnaa ajaaniib iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowlada federalka. Hase yeeshee afhayeen u hadlay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay ka badbaadeen dadkii ku sugnaa gudaha Hotelka qaraxan,
Waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay weerarka qaraxa, laakiin waxaa soo baxaya inuu jiro burbur hantiyadeed oo aad u badan. Wararka qaar ayaa sheegaya in ugu yaraan toban ruux ay ku dhinteen qaraxan tiro kalana ay ku dhaawacmeen.
Sidoo kale saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa sheegaya in waxyeelada ugu badan ay soo gaaray ciidamadda ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa sidoo kale la sheegayaa inay waxyeelo kasoo gaartay qaraxyada maanta dhacay.
Qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ah kii ugu horeeyay sanadkan cusub 2017, hase yeeshee 26kii bishii July ee sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa qarax ka dhashay gaari waxyaalaha qarxa lagu soo raray uu ka dhacay meel ku dhow albaabka xerada Xalane.
Masuuliyada qaraxa waxaa sheegtay Al-shabaab, waxaana ay sheegeen iney qaraxaasi ay ku dileen ciidamo badan oo isugu jira Soomaali iyo ajaaniib. Shabakadaha taageera ururka Alshabaab ayaa daabacay mas’uuliyada qaraxa.
Xigasho: Jowhar Media
Warmurtiyeed Ay Soo Saareen Hogaamiyeyaasha Labadii Ciidan Ee Dhawaantan Ku Dagaalamay Magaalada Gaalkacayo
SAWIRO:- Danjiraha cusub ee dalka Farasiiska oo Warqadaha Aqoonsiga laga guddoomay
Gobolo Uu Magacaabay Hogaamiyehii Xilka Laga Qaaday Ee Dowlad Goboleedka Loogu Yeero Hir+Shabeele
Waxaa Dalka Kusoo Noqdaay Ergadii Uu Hogaaminayay Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya
Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo ka horyimid Go’aanki Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Maamulada Galmudug iyo Ahlusunna oo heshiis hordhac ah gaaray
Jen. M. J. Qaalib oo ka hadlay sababta uu isku casilay-Dhagayso
Bethuel Kiplagat oo geeriyooday
Dad ku dhintay rabshado ka dhacay garoon kubadeed oo ku yaal Senegal